နေ့စဥ်သုံး English Idioms ၅၂ လုံးကို လေ့လာကြည့်ရအောင် (Included Examples)
နေ့စဥ်သုံး English Idioms များကို လေ့လာရအောင် …0568
ချိုချဉ်ငံစပ် အမွှေးအကြိုင် အနံ့၊ အရသာမျိုးစုံနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ English Conversation တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင် “Idiom” လို့ခေါ်တဲ့ ဥပစာဆိုရိုးစကားတွေက မပါမဖြစ်ပါ။
ဥပစာတွေက နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ဒေသ၊ ဓလေ့ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးအစားများစွာရှိသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာအနေနဲ့ဆို “ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်နှစ်ကောင်ပစ်”၊ “ဆင်အော်မနိုး”၊ “အနာပေါ်တုတ်ကျ” စသည်ဖြင့် ခိုင်းနှိုင်းတင်စားပြီး သုံးတဲ့ဆိုရိုးစကားများစွာရှိပါတယ်။
Idiom အသုံးပြုရတာဟာ ပျော်ဖို့ကောင်းပြီး မိမိရဲ့ English Conversation ကိုလည်း စွဲဆောင်မှုပိုရှိစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွန်ကြူးစွာ အသုံးမပြုမိဖို့ကလည်း သတိထားရမယ့်အချက်ပါ။ Idioms များ ထောင်ချီရှိသည့်အနက် ၅၂ ခုကို ယခု Blog မှပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Shop App MM နဲ့ အတူ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင် …
မစခင်မှာ အိမ်မှာနေရင်း မိမိရဲ့ Productivity ကိုမြှင့်တင်လိုသူများအနေဖြင့် English Idiom Book နှင့် တခြားသော အင်္ဂလိပ်စာပေများစွာကို Shop App မှ မှာယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု ဝယ်ယူရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
ဒီစာလုံးကတော့ ကျွန်ုပ်တို့သုံးလေ့ရှိတဲ့ Idiom တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရမ်းလွယ်ကူကြောင်း ပြောတဲ့အချိန်မှာသုံးကြပါတယ်။
For Example: “That exam wasapiece of cake for me”
မြန်မာလို ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်နှစ်ကောင်ပစ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့။ တစ်ခါတည်းနဲ့ အခွင့်အရေး ၂ မျိုးလုံးရယူတဲ့အချိန်မျိုးမှာသုံးပါတယ်။
For Example: “He killed two birds with one stone by ordering 50% discount items on free shipping day”
“သူက ခဲတစ်နှစ်လုံးငှက်ကောင်ပစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းကို ပို့ဆောင်မှုအခမဲ့ပေးတဲ့ရက်မှာ ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်”
3. Actions Speak Louder Than Works
အပြောထက် အလုပ်နဲ့သက်သေပြမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
For Example: “I’ am going to show you what I am capable of because actions speak louder than words“
“ကျွန်ုပ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရည်ကို အခုပဲ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြလိုက်ပါမယ်”
4. Don’t Judge A Book By It Cover
လူ (သို့မဟုတ်) အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အပြင်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်မိစေဖို့ကို စာအုပ်ရဲ့အဖုံးနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့ idiom ဖြစ်ပါတယ်။
For Example: “I am not judgingabook by its cover but this packaging looks awful”
“အပြင်ပုံကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ ဒီပါဆယ်ရဲ့ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံက အတော်ဆိုးရွားတာပဲ”
မြန်မာလို “အနာခံမှ၊ အသာစံမယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူတူပါပဲ။
For Example: “I am so worn-out after my workout, but no pain, no gain“
“လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတာနဲ့ ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အနာခံမှ အသာစံမှာလေ”
“GOOD LUCK” ပြောရတာငြီးငွေ့လာရင် “breakaleg” ဆိုပြီး Idiom အနေနဲ့ ပြောင်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်နော်။
For Example: “I wish you breakaleg at your job interview tomorrow”
“မနက်ဖြန် မင်းရဲ့ အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ ကံကောင်းပါ‌စေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်”
ကြုံထောင့်ကြုံခဲ ရှားပါးမှုအခြေအနေကို တစ်သက်မှာတစ်ကြိမ်သာ ပေါ်ထွန်းလေ့ရှိတဲ့အပြာရောင်လဝန်းနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့ Idiom လေးပါ။
For Example: “Shop App is giving away items with 11 MMK only once inablue moon“
“Shop App က ပစ္စည်းတွေကို တစ်နှစ်မှာတစ်ကြိမ်စာသာ မြန်မာ‌ငွေ ၁၁ ကျပ်တည်းဖြင့် ရောင်းချလေ့ရှိပါတယ်”
8. As Clear As Crystal / Crystal Clear
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပြောဆိုရာတွင်အသုံးပြုပါတယ်။
For Example: “Yes! The office rules are as clear as crystal (OR) crystal clear“
“ဟုတ်ကဲ့။ ရုံးတွင်းစည်းကမ်းတွေကို သေချာနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်”
9. As Cool As Cucumber
သခွားသီးရဲ့ အေးမြမှုနဲ့တင်စားပြီး အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုပြသာရာတွင် သုံးနှုန်းတဲ့ idiom တစ်မျိုးပါ။
For Example: “The country is facing an economic crisis, but some people seem as cool as cucumber“
“နိုင်ငံက စီပွားရေးကပ်ဆိုက်နေသော်ငြားလည်း တချို့လူတွေကတော့ အေးဆေးပါပဲ”
10. As Cheap As Chips
အလွန်စျေးသက်သာတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို အားလူးကြော်နဲ့ ခိုင်းနှိုင်းသုံးနှုန်းထားပါတယ်။
For Example: “I am surprised by some items from Shop App as they are as cheap as chips“
“Shop App မှာရှိတဲ့ အလွန်စျေးသက်သာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်ပြီး ကျွန်တော်တောင်အံ့သြသွားပါတယ်”
လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောနေရင်း ထိုသူကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများ ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ အခါမျိုးမှာ “ပြောရင်းဆိုရင်း” ဆိုပြီး သုံးလေ့ရှိတဲ့ Idiom ဖြစ်ပါတယ်။
For Example: “Did you hear what happened to Thuzar yesterday, speak of the devil, here she is”
“မနေ့က သူဇာ ဘာဖြစ်ခဲ့လည်းဆိုတာ နင်တို့သိပြီးပြီလား? ဟော.. ပြောရင်းဆိုရင်း ဟိုမှာ သူလာနေပြီ”
12. Every Cloud Has A Silver Lining
“အဆိုးထဲကအကောင်း” ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေကို မိုးတိမ်မဲတွေကြားက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရောင်ခြည်တန်းနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းအသုံးပြုထားတဲ့ idiom ပါ။
For Example: “A trip has been cancelled due to COVID-19, but I gotachance to learn how to cook at home, every cloud hasasilver lining“
“ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ခရီးသွားမယ့်အစီအစဥ်ပျက်သွားပေမယ့် အိမ်မှာနေရင်း ဟင်းချက်နည်းသင်ယူဖို့ အချိန်ရခဲ့လို့ အဆိုးထဲကအကောင်းလို့ဆိုရမယ်”
ဒီ idiom က “Every cloud hasasilver lining” နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရှိပေမဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “အစပိုင်းမှာကံဆိုးသလိုလိုနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာကံကောင်းသွားတယ်” လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
For Example: “Her being fired from that company wasablessing in disguise that she started her own business and became very successful”
“သူမ ကုမ္ပဏီကအထုတ်ခံလိုက်ရခြင်းက ဆိုးမလိုလိုနဲ့ နောက်ပိုင်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထောင်ပြီး အောင်မြင်လာတော့ အကောင်းလို့ဆိုရမယ်”
ဒီစာလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အခုလက်ရှိအခြေနေအထိ ကောင်းနေဆဲပါပဲလို့ ပြောဆိုရာတွင်သုံးပါတယ်။
A – “Are you enjoying this blog?”
B – “Yes, so far so good“
မေး – “အခု Blog ကိုဖတ်နေရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလား?”
ဖြေ – “အင်း၊ အခုအချိန်အထိ ကောင်းနေတုန်းပါပဲ”
ဒီ idiom ကတော့ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ အသုံးများလေ့ရှိပါတယ်။ “Don’t Give Up” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
For Example: “Hang in there, things will be better tomorrow”
“အခြေအနေတွေက မနက်ကျရင် ပိုကောင်းသွားမှာပါ။ အရှုံးမပေးနဲ့”
စစ်မှန်ဖော်ရွေပျူငှာပြီး ယဥ်ကျေးကျိုးနွံတဲ့ သူတွေကို ရည်ညွှန်းတဲ့အခါအသုံးပြုရပါတယ်။
For Example: “She gives me very honest, helpful advice without judgement. She is very down to earth“
“သူမက ကျွန်ုပ်ကိုတကယ့်စိတ်ရင်းနဲ့ ကူညီပြီးအကြံကောင်းတွေပေးပါတယ်။ သူမက အရမ်းဖော်ရွေပျူငှာတာပဲ”
ကိစ္စတစ်ခုခုကို လုံးလုံး မဆောင်ရွက်တာထက် နောက်ကျပြီးမှဆောင်ရွက်တာက ပိုကောင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီ idiom ကိုမြင်တော့ ယုန်နဲ့ လိပ်ပုံပြင်ကိုတောင်သတိရသွားတယ်မဟုတ်လား?
For Example: “I am sorry I am late to the party, but better late than never, right?”
“ကျွန်တော် ပါတီရောက်လာတာ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မလာတာထက်ဆိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လား?”
ကြောင်တွေ ခွေးတွေ မိုးရွာနေတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပဲ၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတယ်လို့ပြောချင်တဲ့ ချစ်စရာ idiom လေးပါ။
For Example: “It’s raining cats and dogs outside, and the streets are flooding”
“အပြင်မှာ မိုးတွေသည်းထန်စွာရွာနေတာ လမ်းတွေတောင်ရေကြီးကုန်ပြီ”
19. Bigger Fish To Fry
တစ်စုံတစ်ခုထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်လို့ ပြောချင်တဲ့ idiom ပါ။
For Example: “I want to help Alex for his project , but I have bigger fish to fry right now”
“ကျွန်တော် အဲလက်စ်ကိုကူညီချင်ပေမဲ့လည်း လက်တလော ကျွန်တော့်မှာ သူ့ထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိနေပါတယ်”
20. Under The Weather
စိတ် (သို့မဟုတ်) ကျန်းမာရေးအခြေ‌အနေ မကောင်းဘူးလို့ပြောရာတွင်သုံးပါတယ်။ “ဒီနေ့ weather မကောင်းဘူး” ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ဗန်းစကားနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရှိတဲ့ idiom လေးပါ။
Example: “You lookabit under the weather today”
“မင်းကိုကြည့်ရတာ ဒီနေ့ ‌နေသိပ်မကောင်းလိုပဲနော်”
21. On Top Of The World / On Cloud Nine
အလွန်အမင်းပျော်ရွှင်မြူးတူးတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြရာတွင်သုံးပြီး ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေက ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးနေရာ (သို့မဟုတ်) တိမ်လွှာ ၉ ထပ်ပေါ် ရောက်ရှိနေသည်ဟု ဖော်ကြူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
For Example: “I just gota10,000 MMK coupon giveaway from Shop App. I’m on top of the world (OR) on cloud nine“
“ကျွန်တော် Shop App ကနေ ၁ သောင်းကျပ်ကူပွန်ဆုကြီး မဲပေါက်လို့ အရမ်းပျော်နေပါတယ်”
22. Smoke Like Chimney
ဆေးလိပ်အလွန်အကြူးသောက်တဲ့သူ‌တွေကို မီးခိုးခေါင်တိုင်ကအငွေ့ထွက်တာနဲ့ ဟာသနှောကာခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့ idiom ပါ။
For Example: “My father used to smoke likeachimney“
“ကျွန်တော့်အဖေ အရင်ကဆေးလိပ်ကို မီးခိုးခေါင်တိုင်ကအငွေ့ထွက်သလိုသောက်တာ”
23. Chase Rainbows
မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကို မျှော်လင့်ချက်ထားပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကို ရည်ညွှန်းရာတွင် သုံးနှုန်းတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကင်ပေါ်ရှိ သက်တံ့တစ်ခုကို လိုက်ဖမ်းယူနေသည်ဟု တင်စားထားပါတယ်။
For Example: “Mya Mya is trying to get into Harvard with her bad grade. I think she is chasing rainbows“
“မြမြက သူ့ရဲ့ ရမှတ်နဲ့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကို သွားနိုင်ဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး”
24. In A Nutshell
For Example: “Inanutshell, monthly report is wrong!”
In A Nutshell နဲ့ဆင်တူတဲ့ idiom လေးပါ။ ‌လိုတိုရှင်း ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
For Example: “I don’t have much time so let’s just cut to the chase“
26. Cut Corner
တစ်စုံတစ်ခုကို အလွယ်ကူဆုံး၊ အမြန်ဆန်ဆုံး၊ အပေါဆုံးဖြစ်အောင် ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီး ရရှိတဲ့ မှားယွင်းညံ့ဖျင်းတဲ့ ရလဒ်တွေကိုပြောဆိုရာတွင် သုံးနှုန်းပါတယ်။
For Example: “The constructors really cut corners when they built this bathroom, the shower is leaking”
“ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေက ဖြတ်လမ်းနည်းသုံးပြီး ဒီရေချိုးခန်းကို ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပဲ။ အခု ရေချိုးပိုက်က ရေစိမ့်နေပြီ”
အခွင့်အရေးတွေ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားဆိုတာကို သင်္ဘောဆိပ်ကို အချိန်မီမရောက်လို့ သင်္ဘောလွတ်သွားတယ်ဆိုပြီး ခိုင်းနှိုင်းထားပါတယ်။
For Example: “He missed the boat when he did not apply for the job in time”
“သူ အချိန်မီအလုပ်မလျှောက်မိတဲ့အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်”
28. It’s Not Rocket Science
ဒုံးပျံတစ်ခုကဲ့သို့ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုရာတွင်သုံးတဲ့ idiom တစ်ခုပါ။
For Example: “Cooking is notarocket science. You just have to follow the instructions”
“ဟင်းချက်တာက ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းစနစ်အတိုင်းလိုက်လုပ်ရုံပါပဲ”
29. Sit On The Fence
ဆုံးဖြတ်ချက် ၂ ခုရှိရာအနက် တစ်ခုမှမရွေးချယ်ဘဲ အလယ်မှာရပ်တည်နေခြင်းကို ခြံစည်းရိုးပေါ်မှာထိုင်နေခြင်းနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့ ဥပစာပါ။
For Example: “You can’t sit on the fence any longer. You have to vote one candidate right now”
“ခင်ဗျား ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့မရဘူးလေဗျာ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဦးကို အခုချက်ချင်း မဲပေးရွေးချယ်သင့်ပြီ”
“စောစောထတဲ့ငှက်က အစာဝတယ်” ဆိုတဲ့ မြန်မာဆိုရိုးစကားနဲ့ အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
For Example: “If you don’t want to miss the limited discount coupons, you have to use it early before everyone does, remember the early bird catches the worm“
“အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတဲ့ လျှော့စျေးကူပွန်တွေကို မလွတ်တမ်းအရယူနိုင်ဖို့ဆို စောစောထတဲ့ငှက်က အစာဝတယ်ဆိုသလို သူများတွေထက် ဦးအောင်အသုံးပြုသင့်တာပေါ့”
31. Night Owl
ညဘက်ညဉ့်နက်တဲ့အထိ မအိပ်ပဲနေရတာ ‌နှစ်သက်တဲ့သူကို ဇီးကွက်နဲ့တင်စားပြီးသုံးနှုန်းတဲ့ idiom တစ်ခုပါ။
For Example: “In my younger days, I used to beanight owl and would often stay up until sunrise”
“ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ညဉ့်နက်တဲ့ထိမအိပ်ပဲ မိုးလင်းတဲ့အထိနေတဲ့ ညဇီးကွက်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်”
32. Add Fuel To The Fire
“မီးလောင်ရာလေပင့်” ဆိုတဲ့ မြန်မာဆိုရိုးစကားနဲ့ အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
For Example: “When she is angry, don’t say anything. You’d just be adding fuel to the fire“
“သူမ စိတ်ဆိုးနေရင် စကားသွားမပြောပါနှင့်။ သူမ ဒေါသကိုစွပြီး မီးလောင်ရာလေပင့်နေသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်”
33. Add Insult To Injury
“မိအေးနှစ်ခါနာ” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရှိပြီး တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အခြေအနေတစ်ရပ်က ဆိုးသထက်ဆိုးရွားတယ်ဟု ပြောဆိုရာတွင်သုံးနှုန်းပါတယ်။
for Example: “I was late for the client meeting, and then to add insult to injury, I forgot the presentation file”
“ကျွန်တော် Client အစည်းအဝေးကိုနောက်ကျခဲ့တဲ့အပြင် တင်ဆက်ပြသမယ့်ဖိုင်လ်တွေပါ မေ့ကျန်ခဲ့ပါတယ်”
34. Give Someone Colder Shoulder
တစ်စုံတစ်ဦးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မသိချင်ယောင်ဆောင်၊ လျစ်လျူရှု၊ ဥပေက္ခာပြုတဲ့အခါတွင် သုံးနှုန်းပါတယ်။
For Example “John’s wife is angry and giving him the cold shoulder“
“ဂျွန်ရဲ့ ဇနီးက စိတ်ဆိုးနေပြီး သူ့ကို ဥပေက္ခာပြုထားပါတယ်။
35. Break The Ice
တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မဆုံဘူးတဲ့ လူတစ်စု၊ အခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ရဲ့ ဖိအားကိုလျှော့ချစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်၊ ပြောဆိုခြင်းကို break the ice လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
For Example: “He toldajoke to break the ice at the beginning of his speech”
“သူမိန့်ခွန်းမစခင်မှာ ဟာသပြောပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ရဲ့ ဖိအားကို လျှော့ချပေးလိုက်ပါတယ်”
36. Ignorance Is Bliss
အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို မသိတာကပို၍ကောင်းသည်ဟု ပြောဆိုရာတွင် သုံးနှုန်းပါသည်။
For Example: ” When it comes to politics my philosophy is ignorance is bliss “
“နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကျွန်ုပ်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကတော့ မသိလေကောင်းလေပါပဲ”
37. Hear On The Grapevine
အတိအကျမဟုတ်တဲ့ ကောလဟာလ သတင်းတစ်ခုခုကို ကြားရတဲ့အခါမျိုးတွင် သုံးတဲ့ Idiom တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
For Example: “I heard it on the grapevine that Stacy will move to America next summer”
“စတေစီက ‌နောက်နှစ်နွေရာသီ အမေရိကားကိုပြောင်းတော့မယ်လို့ သတင်းကြားခဲ့ရတယ်”
38. The Ball In Your Court
“ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ” ဟုပြောဆိုရာတွင် သုံးနှုန်းပါတယ်။
For Example: “What do you think we should do now? The ball is in your court“
39. Your Guess Is As Good As Mine
ကျွန်ုပ်လည်းမသိဘူး၊ ကျွန်ုပ်မစဉ်းစားတတ်တော့ပါ ဟုပြောဆိုရာတွင် သုံးနှုန်းပါတယ်။
For Example: “I don’t know when the bus will arrive, your guess is as good as mine“
40. It’s Not My Cup Of Tea
တစ်စုံတစ်ခုက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုရာတွင် အသုံးပြုတဲ့ idiom ဖြစ်ပါတယ်။
For Example: “I like to study English, but I don’t like Math very much. It’s not my cup of tea“
“ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာ နှစ်သက်ပေမဲ့ သင်္ချာဘာသာရပ်ကိုတော့ မနှစ်သက်ပါ”
41. Storm In A Teacup
“တစ်စိတ်ကိုတစ်အိတ်လုပ်တယ်” ဆိုတဲ့မြန်မာဆိုရိုးစကားနဲ့ အဓိပ္ပာယ်တူပြီး လက်ဖက်ရည်ခွက်လေးထဲမှာ မုန်တိုင်းတိုက်နေတယ်ဆိုပြီးတင်စားထားပါတယ်။
For Example: “Ryan turned the situation intoareal storm inateacup“
“ရိုင်ယန်က ပြဿနာကို တစ်စိတ်ကိုတစ်အိတ်လုပ်နေတယ်”
42. Cry Wolf
“ကျားကြီးဗျို့!! ကျားကြီး!!” ဟု လျှောက်အော်နေပြီး တကယ်ကျားလည်းရောက်ရော ဘယ်သူမှမကူညီတော့တဲ့ မြန်မာပုံပြင်သကဲ့သို့ ဗြိတန်မှာတော့ ဝံပုလွေနဲ့တင်စားထားတဲ့ idiom ပါ။ အပိုလုပ်ပြီးပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုရည်ညွှန်းရာတွင်သုံးပါတယ်။
For Example: “There was no fire, Charis was just crying wolf“
“ခဲရစ်က တကယ်မီးမလောင်ပဲ အပိုတွေလျှောက်အော်နေခဲ့တယ်”
43. Two Peas In A Pod
ဆင်တူမှု၊ တူညီချက်များရှိတဲ့ အရာနှစ်ခုကို ရည်ညွှန်းရာတွင် အသုံးပြုရာတွင် သုံးနှုန်းတဲ့ idiom ဖြစ်ပါတယ်။ ပဲတောင့်ရှည်သီးထဲက ပဲစေ့နှစ်ခုနဲ့ တင်စားထားပါတယ်။
For Example: “Jane and I are like two peas inapod. People think we are twins”
“ဂျိန်းနဲ့ ကျွန်တော်က တူညီမှုတွေအရမ်းများလို့ လူတွေကအမြွှာလို့တောင်ထင်ကြတယ်”
44. Bend Over Backwards
တစ်စုံတစ်ခုကိုရရှိရန် ကြိုးစားခြင်းကို ရည်ညွှန်းတဲ့စကာလုံးဖြစ်ပါတယ်။
For Example: “Daisy keep bending over backwards to lose weight”
“လီလီသည် ဝိတ်ကျဖို့ အလွန်အမင်းကြိုး‌စားနေပါတယ်”
45. Ring A Bell
အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ရင်းရင်းနှီးနှီးကြားဖူးရာတွင် အသုံးပြုတဲ့ idiom တစ်ခုပါ။
For Example: “That name ringsabell, but I can’t remember where I’ve heard it before”
“အဲ့နာမည်ကို ငါရင်းရင်းနှီးနှီးကြားဖူးနေပေမယ့်လည်း ဘယ်နေရာမှာကြားဖူးခဲ့မှန်း စဉ်းစားမရဘူးဖြစ်နေတယ်”
46. Safe And Sound
အန္တရာယ်တွေများကြားမှ လုံခြုံဘေးကင်းစွာ ဖြစ်တည်နေတဲ့အခြေအနေကိုရည်ညွှန်းရာတွင်သုံးပါသည်။
For Example: “The houses in the village remained safe and sound after the earthquake”
“ငလျင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက် ရွာရှိအိမ်များသည် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာတည်ရှိနေပါသည်”
ခဏတစ်ဖြုတ် တစ်ရေးတစ်မောအိပ်‌စက်ခြင်းကို မျက်တောင်အကြိမ် (၄၀) ခတ်သလောက် အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ တင်စားထားပါတယ်။
For Example: “I am going to take forty winks“
“ကျွန်တော် ခဏတစ်ဖြုတ် အိပ်စက်လိုက်ပါဦးမယ်”
48. Bitter Pill To Swallow
ခါးသီးပြီး လက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေကို ရည်ညွှန်းရာတွင် ဆေးခါးကို မြိုချခြင်းနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းထားပါတယ်။
For Example: “Failing the exam wasabitter pill to swallow for Mary who isasmart student”
“စာကြိုးစားတဲ့မယ်ရီအတွက် စာ‌မေးပွဲကျခြင်းသည် လက်ခံနိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်”
49. Barking Up The Wrong Tree
တစ်စုံတစ်ဦးကို မှားယွင်းစွပ်စွဲရာတွင် အသုံးပြုသော စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
For Example: “The teacher barked up the wrong tree when she accused me of stealing book. It was my Jessie, actually”
“ဆရာမက ကျွန်တော့်ကို စာအုပ်ခိုးတယ်ဟု မှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ အမှန်က ဂျက်စီခိုးခဲ့တာပါ”
50. A Peach
တစ်စုံတစ်ခု (သို့မဟုတ်) တစ်စုံတစ်ဦးကို ခင်ဖို့၊ နှစ်လိုဖို့ကောင်းသည်ဟု ရည်ညွှန်းရာတွင်သုံးနှုန်းပါသည်။
For Example: “You bought meacoffee? Ah! You areapeach”
“ငါ့အတွက် ကော်ဖီဝယ်လာတာလား? အော် .. နင်အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ (ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်ပြောဆိုခြင်း)”
51. The More The Merrier
မြန်မာလို “များလေကောင်းလေ” ဟုပြောဆိုရာတွင် အသုံးပြုပါတယ်။
For Example: “You can invite as many people as you like to the party. The more the merrier”
“ပါတီကို သင်ကြိုက်သလောက် လူဖိတ်လို့ရပါတယ်။ များလေကောင်းလေပဲပေါ့”
52. Call It A Day / A Night
“ဒီနေ့အတွက် ဒီလောက်ပါပဲ” ဟု ကိစ္စတစ်ခုခုပြီးဆုံးရာတွင် သုံးလေ့ရှိတဲ့ idiom တစ်ခုပါ။
For Example: “Let’s call itaday and see you at the next blog”
“ဒီနေ့အတွက် Blog ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်Blog တွင်ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်”
အိမ်မှာနေရင်း မိမိရဲ့ Productivity ကိုမြှင့်တင်လိုသူများအနေဖြင့် English Idiom Book နှင့် တခြားသောအင်္ဂလိပ်စာပေများစွာကို Shop App တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု ဝယ်ယူရန် “ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ”
DarazDaraz MMDaraz MyanmarEnglishEnglish IdiomIdiomIdiomsShop AppShop App MMShop MMshop.com.mm
Previous Article9 Top Rated Beauty ProductsNext ArticleThe Colors Tell About Your Personalities